पाप को भारी बोझ - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2020-01 > पापको भारी बोझ
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि येशूले आफ्नो जुवा कोमल र आफ्नो भार पृथ्वीको अस्तित्वको क्रममा परमेश्वरको शरीरमा जन्मेका पुत्रको रूपमा सहनुभएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै बोल्न सक्नुहुन्छ कि?
एक भविष्यवाणी मसीह को रूप मा जन्मे, राजा हेरोद उसको पछि लाग्यो जब ऊ एक बच्चा थियो। उनले बेथलेहेमका सबै पुरुष बच्चाहरु जो दुई बर्ष वा कम उमेरका थिए मार्न आदेश दिए। एक युवा को रूप मा, येशू, कुनै अन्य किशोर जस्तै, सबै प्रलोभनको सामना गर्नुभयो। जब येशूले मन्दिरमा घोषणा गर्नुभयो कि उहाँ परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त हुनुहुन्छ, सभाघर मा मानिसहरु उसलाई शहर बाट बाहिर खेदे र उसलाई एक कुर्सी मा धकेल्न कोसिस गरे। उनले आफ्नो टाउको राख्ने ठाउँ नभएको बताए। उहाँ आफ्नो प्यारो यरूशलेमको अविश्वासको अनुहारमा रुनु भयो र लगातार उसको समयको धार्मिक नेताहरु द्वारा बदनाम, प्रश्न र उपहास हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक अवैध बच्चा, एक रक्सी पियक्कड, एक पापी, र एक भूतले ग्रस्त झूटा अगमवक्ता को रूप मा उल्लेख गरिएको छ। उसको सम्पूर्ण जीवन उसले यो ज्ञानमा बितायो कि एक दिन उसलाई उसको साथीहरु द्वारा धोका दिइनेछ, परित्याग गरी, कुटपिट गरी र सैनिकहरु द्वारा क्रूर क्रूसमा टाँगिनेछ। सबै भन्दा धेरै, उनी जान्दथे कि उनको भाग्य आफैले सबै मानवता को लागी प्रायश्चित को रूप मा सेवा गर्न को लागी पुरुषहरु को सबै घृणित पापहरु लाई लिन को लागी थियो। तैपनि सबै सहन को बावजुद, उहाँले घोषणा गर्नुभयो: "मेरो जुवा कोमल छ र मेरो बोझ हल्का छ" (मत्ती ११:३०)।
येशू हामीलाई पापको बोझबाट आराम र राहत पाउन उहाँकहाँ आउन भन्नुहुन्छ। येशू यो भन्दा पहिले केहि पदहरु भन्नुहुन्छ: «सबै कुरा मलाई मेरो बुबा द्वारा दिइएको छ; र पिता बाहेक कोहि पनि पुत्रलाई चिन्दैनन्; र पुत्र बाहेक कोहि पनि चिन्दैन र पुत्र जसलाई पुत्रले प्रकट गर्नेछ »(मत्ती ११:२))।
हामी विशाल मानव बोझ को एक झलक पाउँछौं कि येशूले राहत दिने वाचा गर्नुभयो। जब हामी विश्वासद्वारा उहाँकहाँ आउँछौं तब येशूले हामीलाई बुबाको हृदयको साँचो अनुहार प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँ हामीलाई घनिष्ठ, सिद्ध सम्बन्ध को लागी आमन्त्रित गर्नुहुन्छ जसले उहाँलाई केवल पिता संग एकताबद्ध गर्दछ, जसमा यो स्पष्ट रूप बाट स्थापित छ कि पिताले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ र सधैं त्यो माया संग हामी प्रति वफादार रहन्छ। "तर त्यो अनन्त जीवन हो, कि उनीहरु तपाइँलाई चिन्छन्, को हो कि तिमी मात्र साँचो भगवान हौ र जसलाई तिमीले पठाएका छौ, येशू ख्रीष्ट" (यूहन्ना १.17,3.३)। आफ्नो जीवन को दौरान, येशू लगातार चुनौती संग सामना गर्नुभएको थियो, आक्रमण शैतान को प्रतिरोध। यी प्रलोभन र दु: ख मा देखाईयो। तर उहाँ क्रुस मा मानिसहरुलाई बचाउन को लागी आफ्नो ईश्वरीय कमिशन को लागी सत्य रहनुभयो जब उसले मानवता को सबै अपराध बोकेको थियो। सबै पापको बोझ मुनि, येशू, भगवान को रूप मा र एकै साथ एक मर्ने मान्छे को रूप मा, "मेरो भगवान, मेरो भगवान, तपाइँ मलाई किन त्याग्नुभएको छ?" मत्ती (२::४))।
आफ्नो बुबा मा आफ्नो अटल भरोसा को एक संकेत को रूप मा, उहाँले आफ्नो मृत्यु भन्दा केहि समय पहिले भन्नुभयो: "बुबा, मँ मेरो आत्मा तपाइँको हातमा आदेश दिन्छु!" (लूका २३:४)) उहाँले हामीलाई बुझाउनुभयो कि पिताले उहाँलाई कहिल्यै त्याग्नुभएको थिएन, उनी सबै मानिसहरुको पापको बोझ बोकेर पनि।
येशू हामीलाई यो विश्वास दिनुहुन्छ कि हामी उहाँसँग एकतामा छौं उहाँको मृत्यु, गाड्न र नयाँ अनन्त जीवनको पुनरुत्थानमा। यसका माध्यमबाट हामीले आदमले हामीलाई पापमा फ्याँकिएको आध्यात्मिक अन्धोपनको जुवाबाट साँचो मनोशान्ति र स्वतन्त्रता अनुभव गर्दछौं।
येशूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि उद्देश्य र उद्देश्य जसको लागी उहाँ हामीकहाँ आउनुभयो: "तर म उनीहरु लाई जीवन ल्याउन आएको छु - यसको सम्पूर्णता मा जीवन" (जोन १०:१० नयाँ जेनेभा अनुवाद)। येशूले हामीलाई परमेश्वरको स्वभावको साँचो ज्ञान फिर्ता दिनुभयो पापको कारणले हामीलाई अलग गर्नुभयो, र येशूले घोषणा गर्नुभयो कि उहाँ "उहाँको बुबाको महिमा र उहाँको अस्तित्वको प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ" (हिब्रू १: ३)। र त्यो महिमा को प्रकाश।
के तपाईं पितासँग, पवित्र आत्माको बिद्रोहमा उहाँको पुत्रलाई चिन्न सक्नुहुन्छ, र साँचो प्रेमले भरिपूर्ण जीवनको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले संसारको शुरूदेखि नै तयार पार्नुभएको छ!
ब्राड क्याम्पबेल द्वारा